Inona no hatao raha tsy mahita rakitra avy amin'ny iCloud Drive | Avy amin'ny mac aho
Inona no hatao raha tsy mahita rakitra avy amin'ny iCloud Drive ianao
Taorian'ny fikarohana betsaka momba ny tamba-jotra dia tonga tamin'ny tadin'ny mpisera Apple aho izay nisy vahaolana nomena olana iray izay nananako tamin'ny fisehoana antontan-taratasy sasany ao anatiny iCloud Drive. Ny olana izay hamahanay anio dia hita raha mampiasa iCloud Drive amin'ny Mac ianao ary mamorona lahatahiry ao aminy avy amin'ny Finder.
Izay mpampiasa Mac nanapa-kevitra tadiavo ao amin'ny iCloud Drive ny antontan-taratasinao ny zavatra hataonao dia ny mandika ireo rakitra sy lahatahiry ary apetaho ao anaty iCloud Drive. Raha nanao izany ianao dia azo antoka fa mahazo anao ny olana horesahintsika.
Rehefa mamorona rakitra amin'ny solo-sain'izy ireo ny mpampiasa PC na Mac, ny zavatra mahazatra indrindra dia raha voalamina tsara izy dia mamorona lahatahiry ary fisie subfolders. Ankehitriny, raha nanapa-kevitra ny hametraka ny rakitrao rehetra ao amin'ny iCloud Drive ianao dia tsy maintsy manao famerenana fampirimana alohan'ny hanaovana izany satria, amin'izao fotoana izao, ny rafitra iCloud Drive dia mamela ny fitaovana iOS hamaky fotsiny. ambaratonga iray amin'ny lahatahiry.
Izany no antony raha ao anaty fampirimana iray dia manana fampirimana hafa ary ao anatiny ireo Pejy, Isa na fisie Keynote, ireo rakitra ao anatin'io fampirimana anatiny io dia tsy ho hita amin'ny fomba rehetra. Tsy maintsy esorinao ny fisie mankany amin'ny fampirimana lehibe hahitanao ny rafitra iOS.
Araka ny efa natoronay dia tsy hahita afa-tsy io olana io ianao raha mamindra ny ambaratongam-folder avy amin'ny Finder mankany amin'ny iCloud Drive satria raha miditra amin'ny fitaovana iOS ianao ary manandrana manamboatra fampirimana ao anaty hafa ianao, tsy avelan'ny rafitra mitovy aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iCloud » Inona no hatao raha tsy mahita rakitra avy amin'ny iCloud Drive ianao
AmstradUser dia hoy izy:
Ary mbola maitso ny iCloud Drive, tsy manana ny safidin'ny DropBox (ohatra amin'ny asa tsara), ankoatry ny tsy fahazoana miditra mivantana amin'ireo rakitra avy amin'ny iOS (na dia misy ny kinova vaovao aza raha azo atao izany). Tsy hita ny fizarana lahatahiry. Serivisy fitehirizana rahona voafetra tokoa izy io, antenaina hihatsara amin'ny fanavaozana manaraka.
Valio amin'i AmstradUser
Misaotra, toy ny mahazatra hatrany amin'ny fandraisanao anjara!
Manana an'io olana io ihany aho ary tsy azoko ny antony?! Hatramin'izao, mazava ho azy.
Andraso ary, misaotra betsaka!
Andao hojerentsika raha sendra olona izany. Milaza amiko ny iCloud fa tsy manana toerana malalaka aho, afaka mividy bebe kokoa aho, fa raha miditra amin'ny fampirimana fisie amin'ny iPhone-ko aho dia tsy mampiseho zavatra hafa izany amiko, afa-tsy fampirimana poakaty "Documents by readdle"
zoroaster dia hoy izy:
Manana Apple i pad kinova 10.3.4 nomen'ny kanadianina aho ary raha miseho ho azy ny kisary i cloud drive isaky ny mampihetsika ny Apple id aho fa ao aminy, izay Apple dia somary mahia kokoa aho ... tsy misehoa ny Drive rahona satria ho tonga izany! …… ..
Mamaly an'i zoroaster
Navadiko tao amin'ny iCloud ny fisie antontan-taratasiko, ary tsy hitako intsony ny rakitrao, izao azoko izao noho ny fanazavanao, fa tsy haiko ny mamerina ny fisie ahy. Ampianaro azafady
Valio amin'i Ariela
Fanitarana 30 andro ho an'ny Grika, Apple Pay any UK, mamorona sary masina ho an'ny mac, iPods vaovao ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac.
Ahoana ny fomba hampanginana an'i Siri